:: My Little World ::: ရိုက်နေသည်...
စိတ်ကူးတည့်ရာ မြင်သမျှ တွေ့ သမျှ အရာတွေ အားလုံးကို ဓာတ်ပုံလိုက် ရိုက်ဖြစ်နေတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေက အမြန် အမြန်ရိုက်ရတာဆိုတော့ ကောင်းတာလည်း ရှိသလို၊ မကောင်းတာတွေလည်း ရှိတယ်။ တခါတလေ Camera Setting တွေ ပြောင်းဖို့ မေ့သွားတာ၊ ရိုက်ချင်တာကိုတွေ့ လိုက်ပေမယ့် အချိန်မရလို့မရိုက်လိုက်ရတာတွေလည်း ရှိတယ်။ လက်နှေး နေတာလေ။ နောက်ဆို ဒါမျိုးတွေ အဖြစ် မခံနိုင်ဘူး။ အခု အရင်ကထက် လက်မြန်မြန် ရိုက်ထဲ့ လိုက်နိုင်အောင် ကျင့်နေတယ်။ Camera နဲ့လက်နဲ့မကွာပဲ အမြဲနီးပါရှိနေတဲ့ ကျွန်မကို လူကြီးတွေက လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Point & Shoot Camera အစား D-SLR Camera ယူမလား ၀ယ်ပေးမယ်လို့ တောင် မေးလာတယ်။ ပြီးရင်တော့ အခုအလုပ်က ထွက်လိုက် ဓာတ်ပုံသာ လိုက်ရိုက်နေတော့တဲ့။ အားပေးတာ :))... အဲဒီ D-SLR Camera တွေက ဈေးကြီးတယ်။ Lens တွေဆိုလည်း ဈေးကမနည်းဘူး။ မ၀ယ်ပေးပါနဲ့မယူတော့ပါဘူး ဆိုပြီး အလိမ္မာလေး သုံးပြောခဲ့ရတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါ လက်ထဲမှာ အမြဲရှိပြီး သုံးဖြစ်နေတာက "Canon IXUS 110 IS" ပါ။ ( ကြုံတုန်းလေး ဆိုပြီး တမင်ထည့်ပြောလိုက်ပါတယ်။) အဲဒီ Camera လေးက အရွယ်အစား အသေးဆုံးလို့မပြောနိုင်ပေမယ့် ခလုတ်ရှိတဲ့ဘက်က အ၀ိုင်းပုံလေးဆိုတော့ လက်မှာ ကိုင်ရတာ အဆင်ပြေပြီး၊ သုံးလို့ ကောင်းတယ်။ မသိမသာ ခိုးရိုက်လို့ လည်း ရတယ်။ တခြား လက်လှမ်းမှီရာ cameraလေးတွေ ခနယူပြီး ရိုက်ဖြစ်လိုက်တဲ့ အခါတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အတော်လေး နည်းပါတယ်။
အရောင်လေးမျိုးမှာ ဘယ်အရောင်ကို ရွေးချယ်သုံးမယ် ထင်သလဲ...
အခု ရက်ပိုင်းမှာတော့ ပုံတွေသာရိုက်ဖြစ်တာ၊ ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင် သေချာ ပြန်ကြည့်ဖို့ တောင် အချိန်မပေးနိုင်သေးဘူး။ အလုပ်တွေ သိပ်ရှုပ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာခင် အချိန်အတွင်းမှာတော့.... ဒီနေရာမှာ ရောင်စုံ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဝေစည်လာမယ် ဆိုတာကို စိတ်ချလက်ချ အသေအချာ ယုံကြည်ထားလိုက်ပါ။
Update : (2009-05-26) ဖြေပြီ။ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ပါ။
ပန်းရောင် မဟုတ်၊ အပြာရောင် မဟုတ်၊ ရွှေရောင် မဟုတ် တဲ့ ..
(မ KOM အခေါ်အရတော့ အဖြူရောင်) ငွေရောင်ကို သုံးပါတယ်။
ခုတလော ဒီနေရာမှာ တစ်ခုခုရေးဖြစ်ဖို့ တောင် အတော်ကြိုးစားနေရတဲ့အတွက် ကွန်မန့် တွေ တစ်ခုချင်း မပြန်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီနေရာကို လာရောက်ပြီး ကျွန်မ ရေးသမျှ ဖတ်ကြည့်သူများ၊ ကွန်မန့် ချန်ခဲ့သူများ၊ အခုပိုစ့်မှာ ခန့် မှန်ဖြေကြည့်သူများ၊ အားလုံး.. အားလုံးကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 5/22/2009 04:18:00 PM
အယ် မိန်းခလေးဘဲ ပန်းရောင်ကိုင်မှာပေါ့။ လာထား မှန်တယ်မဟုတ်လား။
Friday, May 22, 2009 7:39:00 PM
Friday, May 22, 2009 9:08:00 PM
ကျင့်ချင်ရင် ဘွှိုင်းစ်ကိုခေါ်ပြီး ပန်းသီးကိုခေါင်းပုံတင်ပြီး ရိုက်ကြည့်ပါလား။
Friday, May 22, 2009 9:09:00 PM
အချစ်ကို သာပြောလိုက်ပါ။ ပါးလေးတော့ဖောင်းပစေ။
Friday, May 22, 2009 9:10:00 PM
ဓာတ်ပုံ blog သပ်သပ်ခွဲပါလား။
waiting for your photo posts.
Friday, May 22, 2009 10:11:00 PM
Saturday, May 23, 2009 4:17:00 PM
ပန်းရောင် မဟုတ်၊ အပြာရောင် မဟုတ်၊ ရွှေရောင် မဟုတ် တဲ့ ..(မ KOM အခေါ်အရတော့ အဖြူရောင်) ငွေရောင်ကို သုံးပါတယ်။
Tuesday, May 26, 2009 1:02:00 PM
ဓါတ်ပုံတွေ တင်ရင် လာငေးပါမယ်။
Tuesday, May 26, 2009 4:44:00 PM
ရိုက်မယ့်သူတွေ များကုန်ပဟ။ ငါ မော်ဒယ်လိုင်းပြောင်းမှ တော်ချေမယ်။
Wednesday, May 27, 2009 12:14:00 AM
Wednesday, May 27, 2009 12:15:00 AM
၀က်ခြေထောက်စွပ်ပြုတ်၊ ၀က်သားကောက်ညှင်းထုပ်၊ ၀က်သာ...
The sky I had seen in Shan State
♪ You will always find your way back home....